ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုအခမဲ့ခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံး GPS လမ်းကြောင်း (၁၀) ခု
နေအိမ် Phone Tracker ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာများကိုအွန်လိုင်းမှအခမဲ့ခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးဆယ်လူလာ GPS လမ်းကြောင်းများ
သင်ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေပါသလား။ အိုကေ၊ ငါမင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောမယ်၊ အင်တာနက်ကပြည့်နေတယ်။
သို့သော်၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးသည်ဖုန်းကိုခြေရာခံသည့် apps အများစုသည်အမှိုက်ပုံးဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်။ သင်သည်အားကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုနှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခါတွင်သာမန် GPS လမ်းကြောင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်သင့်အားမည်သည့်ဖုန်း၏တည်နေရာကိုချက်ချင်းပေးစွမ်းနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသောဖုန်းကိုခြေရာခံသည့်အက်ပ်များအကြောင်းသင့်ကိုပြောပြပါမည်။ ဤလျှောက်လွှာဖြင့်မည်သူမဆိုသင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်နေသည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း GPS ဆဲလ်ဖုန်း Tracker
အပိုင်း ၁။ ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုမည်သို့အခမဲ့ရှာဖွေမည်နည်း
၁.၁ Minspy- Ninja ဖုန်းခြေရာခံ
အဘယ်ကြောင့် Minspy သည်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းတည်နေရာခြေရာခံသည်
Minspy 'Secret' GPS Tracker
အပိုင်း ၂။ ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုမိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့်ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ
၂.၁ Spyic - Pro အဝေးမှဆဲလ်ဖုန်းခြေရာခံခြင်း
အပိုင်း ၃: တစ်စုံတစ် ဦး ၏ GPS ဖုန်းတည်နေရာကို online တွင်အခမဲ့ရှာဖွေရန်
၃.၁ Spyier - တိတ်ဆိတ်သော GPS Phone Tracker
အပိုင်း ၄။ ဖုန်းတည်နေရာကိုလျှို့ဝှက်ထားနည်း
အပိုင်း ၅: ဖုန်းကိုအခမဲ့ခြေရာခံခြင်း (Android အတွက်) ။
အပိုင်း ၆: ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတည်နေရာကိုနံပါတ်အလိုက်ဘယ်လိုရှာရမလဲ (iOS အတွက်)
အပိုင်း ၇: ဖုန်းတည်နေရာကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ
အပိုင်း ၈။ ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုမိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့်ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ
အပိုင်း ၉။ မိသားစုဝင်များ၏မိုဘိုင်းတည်နေရာကိုခြေရာခံရန်
အပိုင်း ၁၀ - GPS မိုဘိုင်း Tracker
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ချက်များသည်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားစွာကွဲပြားသောကြောင့်အချို့အက်ပ်များသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သူကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အကောင်းဆုံးကနေစပြီးတော့ဒီကနေရွေ့ဖို့အတွက်ငါဒီမှာ app တွေကိုစာရင်းပြုစုထားတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကဆဲလ်ဖုန်းခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေပေမဲ့၊ ဒီအပိုင်းမှာငါပြောပြမဲ့နည်းစနစ်မျိုးကိုဘယ်သူမှမပေးပါဘူး။
သင်၏ကလေး၊ အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စသည့်သင်ဂရုစိုက်သူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေလိုသောအခါဤဖုန်းကိုခြေရာခံသည့်နည်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤမျှလောက်မတွေ့ရသေးသောအရာများကိုငါအလောင်းအစားလုပ်မည်။
Minspy Android ဖုန်းများနှင့်အိုင်ဖုန်းများကိုရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စေမည့်ကောင်းမွန်သောဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Minspy ကိုသင်၏ဖုန်းအက်ပ်စတိုးတွင်တွေ့နိုင်သောကျန်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ Minspy သည်မည်သည့်ကိရိယာ၏တည်နေရာကိုမည်သူမျှမသိဘဲစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအက်ပလီကေးရှင်းများအနက်တစ်ခုကိုသင်ရှာမတွေ့ပါ။
ဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းရှာဖွေနေလျှင် Minspy တွင်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ တစ်ခုစီသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုသိသောအခါ Minspy ထက်ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Minspy မှာအခြားအခမဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံတဲ့နည်းလမ်းတွေအားလုံးမှာမပါ ၀ င်တဲ့ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်တွေအများကြီးရှိလို့ပဲ။
သင်၏ဖုန်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာထည့်သွင်းထားခြင်း၏အခက်အခဲကိုကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်သည်၊ ဤနေရာသည် Minspy ဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်း၏မျက်နှာပြင်သည်ကယ်ဆယ်ရေးအဖြစ်ရောက်လာသည်။
Minspy ကိုသင်သုံးသောမည်သည့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှမသုံးပါ၊ သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်ပီစီတွင်မည်သည့်အပလီကေးရှင်းကိုမျှတပ်ဆင်ရန်မလိုပါ။ ဒီ interface ကရိုးရှင်းပြီးအနိမ့်ဆုံးပါ၊ အဲဒါကိုလည်ပတ်ဖို့အတွက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ဖို့မလိုပါဘူး။
Minspy နှင့် ပတ်သတ်၍ ထူးခြားသည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်ကြည့်နေသည်ကိုမသိဘဲတစ်ယောက်ယောက်၏တည်နေရာကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေး၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့မသိဘဲခြေရာခံချင်သည့်အခါ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန် GPS tracker ကိုအသုံးပြုနေချိန်တွင်သင်ပစ်မှတ်ကို root သို့မဟုတ် jailbreak မလိုပါ။ သို့သော်၊ ဖုန်း၏တည်နေရာကိုသူတို့မသိဘဲခြေရာခံလိုက်သောလျှို့ဝှက် GPS trackers များသည်များသောအားဖြင့်သင့်အား target device ကို root သို့မဟုတ် jailbreak လုပ်ရန်တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။
Minspy ၏လျှို့ဝှက် GPS tracker သည်ပစ်မှတ်ထားသောစက်ကို root သို့မဟုတ် jailbreak မလိုပဲအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထွန်းလင်းတောက်ပသည်။
Minspy သည် GPS ခြေရာခံခြင်း မှလွဲ၍ နောက်ထပ်အရာ ၃၅ ခုကိုပေးသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်တစ်ခုစီသည်သင်အလွန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Minspy သည်ဤလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရုံဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုစိတ်ကူး။ ရရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ဒါကြောင့် Minspy ကမင်းကိုပေးခဲ့တယ် အခမဲ့ web သရုပ်ပြ သင် Minspy အတွက်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲသုံးနိုင်သည်။
ငါအရင်လိုပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Minspy ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာခြေရာခံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားသူတို့၏အသုံးပြုသူများကိုသင်သူတို့၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံနေသည်ကိုမသိကြောင်းသေချာစေသည်။ ၎င်းသည် iPhone နှင့် Android ဖုန်းများအတွက် Minspy စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကလာသောအခါ iPhone ကိုခြေရာခံ, Minspy သည်သင်၏ iPhone ကိုထိရန်မလိုအပ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းတွင်မည်သည့် application ကို install လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iOS အတွက် Minspy အိုင်ဖုန်းအားလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ iCloud အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးချပြီးလည်ပတ်နိုင်တယ်။
iCloud feature ဖြင့် iPhone data အားလုံးကို iCloud server သို့ upload လုပ်သည်။ ဒီ iCloud backup မှ Minspy သည်စက်ပစ္စည်းတည်နေရာ (နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ) အကြောင်းကိုလေ့လာလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်လုပ်ဖို့ရှိသည် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဖုန်းတည်နေရာကိုလျှို့ဝှက်စွာခြေရာခံ သူတို့ရဲ့ iCloud အထောက်အထားများကို Minspy ဖြင့်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
ကလာသောအခါ Android ဖုန်းကိုခြေရာခံဖုန်းကိုခြေရာခံသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုစီသည်သင့်ဖုန်းကို track tracking application တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင် Minspy ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုဖြစ်စေဤကိစ္စသည်ကိစ္စဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်သည် Minspy ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင်သည် 100% ကိုယ်ပျောက်စစ်ဆင်ရေးကိုကတိပြုသည်။ ဒါကအထူးဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် Android ဖုန်းများအတွက် Minspy။ ဒီနေရာမှာဘယ်လို:
Android အတွက် Minspy app အရွယ်အစားသည် ၃ MB အောက်သာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ဖုန်းပေါ်တွင် Minspy တပ်ဆင်ခြင်းသည်မြန်ဆန်သည်။ Minspy ကိုထည့်သွင်းပြီးသောအခါ Minspy အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပစ်မှတ်ထား Android ဖုန်းမှမှော်အတတ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
ဤအက်ပ်သည်နောက်ခံတွင်သာအသိပေးချက်များမပြုလုပ်ဘဲနှင့်ဘက်ထရီယိုစီးမှုမရှိပဲလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားလိုသည်ဟုခံစားရလျှင်သင်အသုံးပြုနေသောမည်သည့် web browser မှမဆို Minspy dashboard မှတစ်ဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။
ဤအရာသည်ပထမအကြိမ် (စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း) ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ သူတို့၏ဖုန်းကိုသင်ထပ်မထိရန်သေချာစေသည်။ ဒါက Minspy ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
** မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းက၎င်းကိုခြေရာခံ app ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ Android ဖုန်းကိုခြေရာခံနိုင်သည်ဟုဆိုလျှင်၎င်း app သည်အတုဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအများအားဖြင့်လိမ်လည်သူတွေကသင့်ကိုသူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ **
Minspy ကိုသင်ချစ်ပြီးပြီ (အထူးသဖြင့်သင်တစ်လုံးကြည့်လျှင်) တိုက်ရိုက် web သရုပ်ပြ အရာငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့) သင်သည် Minspy ဖြင့်စတင်စာရင်းသွင်းလိုပါကကျန်စာရင်းများကိုမစစ်ဆေးဘဲမနေပါနှင့်။ မင်းကိုအပြစ်မတင်ဘူး ယခုငါတူညီသောအဆင့်ဆင့်ပြောပြပါမည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဆဲလ်ဖုန်းကို Minspy ဖြင့်ခြေရာခံခြင်းသည်၎င်းတို့သည် Android ဖုန်းဖြစ်စေ၊ ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ်ငယ်များတွင်ဤပလက်ဖောင်းအတွက် Minspy လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်လေ့လာခဲ့သည်။
ယခုပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီအတွက် Minspy အသုံးပြုခြင်းအဆင့်များကိုကြည့်ကြပါစို့။
အဆင့် ၁: Minspy အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ သင်ခြေရာခံချင်သည့်ဖုန်း - Android ဖုန်းသို့မဟုတ် iPhone ကို အခြေခံ၍ စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုရယူပါ။
အဆင့် ၂: က။ iPhone ကိုခြေရာခံရန် Minspy ဖြင့်ပစ်မှတ်ဖုန်း၏ iCloud အထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးပါ။ ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ Minspy က၎င်းကို၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားမှာမဟုတ်ဘူး။
(ခ) Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုခြေရာခံရန် Minspy အက်ပလီကေးရှင်းကိုပစ်မှတ်ထား Android ကိရိယာတွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သင်မှတ်မိပါကဤအက်ပ်သည်လုံးဝဝှက်ထားလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃: တခါ အဆင့် ၂ ပြီးပြီဆိုရင် Minspy ကအချက်အလက်တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေပြီဆိုလျှင် Start ကိုနှိပ်ပါ။ Install ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်နှင့်သင်၏ dashboard ကိုဖွင့်ရန်သင်ဤကိုနှိပ်ပါ။
သင်သည်ဤ dashboard မှတဆင့် Minspy ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ Minspy အကောင့်ကိုသင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ဖြင့် logging လုပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုလေ့လာရန်သင်စဉ်းစားသောအခါ၊ ဤအင်္ဂါရပ်များသည်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
တည်နေရာ tab သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပစ်မှတ်ကိရိယာ၏တိုက်ရိုက်တည်နေရာကိုပြသည်။ သင်သည်လတ်တလောတည်နေရာကို timestamp တစ်ခုနှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်တည်နေရာရှာဖွေခြင်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် geofencing feature ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စက်၏တည်နေရာကိုမြေပုံပေါ်တွင်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ စက်သည်ဤကန့်သတ်ချက်ကိုဖြတ်ကျော်ပါကသင်သတိပေးချက်ချက်ချင်းရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်မရေမတွက်နိုင်သောဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး Minspy ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုမတွေ့ရပါ။ သင်လည်းအလားတူခံစားခဲ့ရလျှင်သင်ခံစားနိုင်သည် ချက်ချင်းပဲ Misnspy ကိုစတင်အသုံးပြုပါ စာရင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီးမသွားဘဲ မင်းအခုရှိနေတဲ့နေရာမှာငါရှိနေလို့မင်းကိုအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုရှာဖွေလိုပါက Minspy သည်၎င်းကိုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်သောအခြားအခြားရွေးချယ်စရာများလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာပထမအကြောင်းပြောပြပါရစေ။
သူလျှို သည်အခြား 24 devices များမှ live location update များအားသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အဝေးမှဆဲလ်ဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android ဖုန်းများသာမက iPhone များကိုပါခြေရာခံနိုင်သည်။
Spyic သည်ပထမနေရာမရှိပါက၎င်းသည် Minspy ထက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Spyic သည်သင်၏အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် target device ကို root သို့မဟုတ် jailbreak လုပ်ရန်မတောင်းဆိုပါ။
သင်ချစ်ရမည့် Spyic နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သောအချက်များမှာ -
အသုံးပြုသူ Oriented Interface:
Spyic ၏မျက်နှာပြင်သည်သင့်အားလုံး ၀ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးသည်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဒီအချက်ကြောင့်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်သင်ချွေးမချသင့်ပါ။
အသုံးပြုသူ ဦး တည်ချက်အကြောင်းပြောသောအခါ၊ Spyic သည်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်မည်သည့်ပြtoနာကိုမဆိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားနာရီနှင့်ချီအလုပ်လုပ်သောလူတစ်စုရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်ရှာတွေ့မည့်တည်နေရာ tracker အများစုနှင့်မတူပါ။
သင်ဖုန်း၏တည်နေရာကိုသူတို့မသိဘဲခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါသင် app ကိုပေးရပါမည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့မဟုတ် (သင်လိမ်လည်လှည့်စားလိုလျှင်မဟုတ်ပါ)
သို့သော်၊ သင် app အတွက်သင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ Spyic သည်အားလုံး၏စျေးအနိမ့်ဆုံးအစီအစဉ်ရှိသည်။
မလွဲစေနဲ့: သူမမသိဘဲကျွန်ုပ်၏သား၏ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
Minspy နှင့် Spyier တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးသူတို့သည်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအဲဒီမှာထွက်ရှိအကောင်းဆုံးကို tracker ဆယ်ပါးအကြောင်းကိုပြောပြရန်ကတိပေး, ငါကအတိုင်းအသက်ရှင်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်တတိယအကောင်းဆုံးတည်နေရာခြေရာခံခြင်း app ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သူလျှို တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကအသုံးပြုသောဖုန်းကိုခြေရာခံသည့် application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် web application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Android ဖုန်းများနှင့် iPhone များကိုခြေရာခံရန်အလုပ်လုပ်သည်။
Spyier ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်များတွင်သုံးနိုင်သည်။ Spyier အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးပါက၊ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သင်၏ dashboard သို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သငျသညျကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်များတန်ချိန်ရှိပါတယ်, သင်သူတို့ထဲကမည်သည့်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုတွင်ရှိသည့်ရှေးအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးတည်ထောင်ထားသောဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုလိုချင်ပါက Cocospy သည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
နင် နေသမျှကာလပတ်လုံးစမတ်ဖုန်းန်းကျင်ဖြစ်သကဲ့သို့တယ်လီဖုန်းခြေရာခံခြင်းလယ်ပြင်၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android ဖုန်းများနှင့်အိုင်ဖုန်းများအတွက်ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအပြည့်အ ၀ ဖြစ်ပြီးသင့်ကြင်ဖော်နှင့်ကလေး၏တည်နေရာကိုခြေရာခံချင်လျှင်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
Cocospy သည် Forbes, Techradar, PCMag စသည့်ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီများမှပင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
သင်ပြီးပြည့်စုံသောဖုန်းခြေရာခံခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင် Cocospy သည်၎င်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အားပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကားအားလုံးသည်ဆဲလ်ဖုန်းများကိုခြေရာခံရန် third-party application များဖြစ်သော်လည်းသင်ခြေရာခံချင်သောဖုန်းသည် Android OS ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပါကပုံမှန် Android ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းကို stealth mode ဖြင့်ခြေရာခံရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
Android Find My Device သင်၏ဂူဂဲလ်မှသင်ပေးသောသင်၏ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်နေရာလွဲနေသည့်ဆဲလ်ဖုန်း၏တည်နေရာကို GPS မှတစ်ဆင့်ခြေရာခံရန် Google မှပေးသောခြေရာခံခြင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Find My Device သည်သင်၏ Gmail ID ထဲသို့ဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေသည်။
Find My Device ကိုအသုံးပြုရန်သင်ခြေရာခံချင်သောဖုန်းပေါ်ရှိတည်နေရာမှတ်တမ်းကိုဖွင့်ရမည်။ မြေပုံအပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်သင်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ 'Settings'> 'Personal Content'> ကိုသွားနိုင်ပါတယ်တည်နေရာသမိုင်းကြောင်း.
ဒီချိန်ညှိချက်ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုအချိန်မရွေးသင်ခြေရာခံနိုင်တယ်။ သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့သာလျှင်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကိရိယာများဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာပါသို့မဟုတ် Android ဖုန်းများရှိ Find My Device အက်ပ်မှတဆင့်။
Find My Android Device သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းသင် Android ဖုန်းကိုအသုံးပြုမှသာအလုပ်လုပ်သည်။
မင်းရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံချင်ရင် iPhone ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်ကဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသော iPhone ကိုရှာရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ သင့်ဖုန်းကိုအခြားကိရိယာတစ်ခုမှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုခြေရာခံရန်အိုင်ဖုန်းအားလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Google Find My Device ၏ iPhone ဗားရှင်းနှင့်တူသည်။
Find My iPhone တွင်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတွင်ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်။ iPhone ၏တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သော iPhone ၏ iCloud ID ဖြင့်အက်ပ်ကိုသွားခြင်းဖြင့်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာတည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် 'Settings' သို့ သွား၍ သင်၏ထိပ်ဆုံးရှိသင်၏ Apple profile ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် 'iCloud'> 'Find My iPhone' သို့သွားပြီး၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ iPhone ကိုအချိန်မရွေးခြေရာခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
သင်မည်သည့် iPhone ကိုမဆို web browser မှတဆင့်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်လည်းခြေရာခံနိုင်သည် ICloud ကျွန်ုပ်၏ iPhone စာမျက်နှာကိုရှာပါ
Spyine သည်အလွန်ကောင်းသောဖုန်းကိုခြေရာခံသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အား iPhone ၏နေ့ရက်အချိန်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ယခုအထိစာရင်းပြုစုထားသည့်အခြားသူများထက်အတော်လေးအသစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသည်ကဒီထက်နည်းအေးမြစေပါဘူး။ အမှန်မှာ၊ ၎င်း၏သုံးစွဲသူအခြေစိုက်စခန်းသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးများလာနေပြီးလူအများကသူတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများကို Spyine နှင့်မျှဝေနေကြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ Spyine သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးသို့တက်လျှင်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုငါ Spyine ကိုဤစာရင်းတွင်သတ္တမမြောက်နေရာပေးလိမ့်မည်။
သင်သိပြီးသားတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုသိလိုလျှင်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်ခြေရာခံချင်သောဖုန်းသည်သင်၏မိသားစု ၀ င်သို့မဟုတ်သင်ကောင်းစွာသိကျွမ်းသူတစ် ဦး မဟုတ်လျှင်ကော။
ဤကိစ္စတွင် Zosearch သည်သင်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ Zosearch သည်ဆဲလ်ဖုန်းကို၎င်း၏နံပါတ်ဖြင့်ခြေရာခံနိုင်သည့်ပြောင်းပြန်တယ်လီဖုန်းရှာဖွေရေးစက်ဖြစ်သည်။
Zosearch ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Google ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သင်ခြေရာခံလိုသည့်တည်နေရာ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရုံသာလိုအပ်သည် Zosearch ဖုန်းနံပါတ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ.
ထို့နောက် Zosearch သည်သန်းထောင်ချီသောအချက်အလက်များ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းတို့၏အိမ်လိပ်စာနှင့်သူတို့၏အလုပ်လိပ်စာများအပါအ ၀ င်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရှာဖွေသည်။
Fami360 သင်၏ကလေးတွေဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုခြေရာခံချင်လျှင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိဘများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ကလေးများမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုရှာဖွေရန်ဖုန်းကိုခြေရာခံသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေနေသောလူများဖြစ်သည်။
မိဘများအနေဖြင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကြောင့် Fami360 သည်သင်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်ဖုန်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကလေးတွေအပေါ် tabs များထားရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ကလေးတွေဘာကိုရှာဖွေနေသည်ကိုရှာဖွေရန် browser tracker ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
GPS tracker အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေနေသူများစွာသည်စွန့်စားမှုအားကစားများပြုလုပ်ကြသည်။ ဒီလူတွေအတွက်ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။
မင်းဘူး ထိုကဲ့သို့သောတောင်တက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းစသည့်အားကစားများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ AllTrails သည်သင်၏လေ့လာရေးခရီးအတွက်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုး ပေး၍ ၎င်းတို့ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသောအရာနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စွန့်စားခန်းအားကစားဝါသနာရှင်များအတွက် AllTrails ကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။
သင်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သော application များပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါ၊ ဤစာရင်းမှအက်ပ်သည်သင်အွန်လိုင်းရှာတွေ့နိုင်သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများထက်သာလွန်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင် GPS tracker ကိုရှာနေပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဤစာရင်းမှမည်သည့် app ကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
ယခင်ဆောင်းပါးFacebook Phone Hack ကို Facebook Hack နည်း